CIN Khabar असार साउनमा कोरोना भयावह बन्ने ! सङ्क्रमित संख्या कति हुन सक्ला ?
डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ शनिबार, जेठ ३, २०७७, ०८:४३:००
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, नेपालमा असार र साउनमा कोरोना संक्रमण धेरै बढ्नेछ । यो अबधिमा हजारौं जनालाई संक्रमण हुनेछ । ती मध्ये ८५% लाई सामान्य लक्षण देखिएर आफै निको हुनेछ । बाँकी १५% मध्ये आधालाई अस्पतालको सामान्य उपचारले निको हुनेछ । बाँकी ७-८% लाई आइसीयु, भेन्टिलेटर आबश्यक पर्नेछ । त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात ३% को मृत्यु हुनसक्छ ।
मृत्यु हुनेमा जोखिम बर्ग जस्तै जेष्ठ नागरिक, दीर्घ मुटु, फोक्सो, मृगौलाका बिरामी, क्यान्सरका तेस्रो तथा चौंथो स्टेजका बिरामी, अंग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी र इम्युनिटी सप्रेस भएका बिरामी हुनेछन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा सक्रिय उमेरका व्यक्तिमा संक्रमण धेरै देखिएको छ । संक्रमण कम भएकोले भाइरसको लोड थोरै छ । तर संक्रमण बढ्दै जाँदा जोखिम बर्गका संक्रमितलाई आइसीयु ,भेन्टिलेटर आबश्यक हुनेछ । करिब २-३.५% को मृत्यु हुन सक्नेछ ।
सिमाना १० % शिल गर्ने, संक्रमित क्षेत्र शिल गर्ने, आवतजावत बन्द गर्ने, सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अबल्मबन गर्ने, डर-त्रास नमान्ने एबम आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउने गर्दा यो रोगसँग लड्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, ०८:४३:००